ကဗျာလေးကို ကြိုက်နှစ်သက်၍ သာကီနွယ် ဘလော့မှ ကူးယူတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by Army Soul at 2:52 AM2comments
မိန်းကလေး အရွယ်စုံတော်တော်များများသည် အရုပ်များကို နှစ်သက်ကြသည်။ ထိုအထဲတွင် ကျွန်တော့်ချစ်သူလေးကလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ မွေးနေ့တိုင်းမှာ မကြီးမငယ်နှင့် အရုပ်များကို ခုံမင်စွာ လက်ဆောင်တောင်းလေ့ရှိသော သူမ။ တစ်ခုသော ညနေခင်းတွင် RP ရဲဘော်က အဆောင်ကို ရောက်လာကာ ကျွန်တော့်ဧည့်သည် ဂိတ်တွင်ရောက်နေကြောင်း လာပြောလေသည်။ သူမပဲဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်ကို တွေးမိကာ ယူနီဖောင်းလဲမည့် အစီအစဉ်ကို ဖျက်ကာ RP နောက်မှ ခပ်သွက်သွက်လေးလိုက်ခဲ့သည်။ သူမကားလေးက RP ဂိတ်တဲနားတွင်ထိုးရပ်ထားလေသည်။ ကျွန်တော်ကားအနားရောက်တော့ သူမ ကမန်းကတမ်းဆင်းလာကာ..
"ဒါများ မီးငယ်ရယ်..ဖုန်းဆက်လိုက်လည်းရသားနဲ့။ အဝေးကြီးလိုက်လာရတယ်လို့။"
သူမ ဘာမှမပြောပဲ ကားတံခါးတစ်ဖက်ခြမ်း(lover seat)ဖက်ကို ပြေးသွားကာ ကားထဲမှ ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်နေလေသည်။ သူမ..ကျွန်တော့်နားပြန်ရောက်လာချိန်တွင် ဘာပြောရမှန်း မသိနိုင်လောက်အောင် ကျွန်တော်ဆွံအသွားသည်။
သူမလက်ထဲတွင် ကျွန်တော့်ခါးလောက်အမြင့်ရှိသော ၀က်ဝံရုပ်တစ်ခု၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်လက်ထဲသို့ ထိုးထည့်လေသည်။
"ကိုကြီး..ဒီဝက်ဝံရုပ်ကို ယူသွားနော်။ မီးငယ်ခရီးသွားနေတုန်း..မီးငယ်ကိုယ်ပွား ဒီကောင့်ကို ထားခဲ့မယ်။ ဒါပဲ"
သူမစကားက ပြတ်သားလှသည်။ ဘေးကျပ်နံကျပ်။
"မီးငယ်..ကိုယ်ကစစ်သားနော်..မီးငယ်။ ဒီအရုပ်ကြီးက ဘာလုပ်ရမှာတုန်း။ မီးငယ်ကို သတိရရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်လေ။ ဒါကြီးကို မထားခဲ့နဲ့ကွာ။"
သူမ မျက်နှာက ငိုတော့မယောင်။ သြ..မိန်းကလေးတွေများ တယ်လည်းတတ်နိုင်ကျသကိုး။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ အမောင်ယောကျာ်းကြီးကပဲ သဘောထားကြီးရတော့သည်။ သူမက ၀မ်းပန်းတသာဖြင့် ပြန်ရန်ကားပေါ်သို့တက်သွားလေသည်။ တပ်ဂိတ်တံခါးဖွင့်သံကြောင့် နောက်ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်မှ တပ်ရင်းမှူး၏ကားဝင်လာလေသည်။
ပြသနာက စပါပြီ။ ၀တ်ထားတာ ယူနီဖောင်း။ လက်တစ်ဖက်မှာက ၀က်ဝံရုပ်တစ်ကောင်။ အလေးကပြုရတော့မည်။ အရုပ်ကလည်း ပစ်ချမရ။ အလေးကလည်း မပြု၍မရ။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ အရုပ်ကို ဘေးကပ်လျက်ပိုက်ကာ အလေးပြုလိုက်ရသည်။ သူမကတော့ အဖြစ်အပျက်များအားလုံးမြင်ကာ လျှာလေးသာထုတ်ပြကာ ထွက်ခွာသွားလေသည်။ ကျွန်တော်လည်း ရှက်ရှက်ဖြင့် အခြားသူများ ထပ်မမြင်ခင် အရုပ်ကို ရင်ဝယ်ပိုက်ကာ အဆောင်သို့ပြေးရလေသည်။
၀က်ဝံလေးရောက်ပြီး ၂ရက်မြောက်နေ့တွင် ရင်းမှူးကလိုင်းတွေစစ်မယ်ဆိုတော့ ပြသနာက စပါပြီ။ ဒီအကောင်ကိုက ဘယ်နားသွားထားရမည်မသိ။ သေတ္တာကလည်း ဟမ်ဘာကာဖြစ်နေပြီ။ အိမ်သာထဲကလည်း ထည့်လို့မကောင်း။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ ကတင်ပေါ်တွင်သာ နံရံကိုမှီ၍ အခန့်သားထိုင်ခိုင်းထားလိုက်တော့သည်။ ကျွန်တော့်အခန်းဝသို့ ရင်းမှူးရောက်ချိန်တွင် ဘာမှမပြောဘဲ ခပ်ပြုံးပြုံးဖြင့်သာ ကျွန်တော့်ပခုံးကိုပုတ်ကာ ပြန်ထွက်သွားလေသည်။ ထိုမှသာ ကျွန်တော်အသက်၀၀ရှူနိုင်တော့သည်။ ကျွန်တော့်အဖြစ်ကို ညီတော်များက ပြောပြောကာ အောချနေကြလေသည်။
သြ..ချစ်သူ၏ ကိုယ်ပွားလေး...ချစ်သူ၏ကိုယ်ပွားလေး။ ကျွန်တော့်ချစ်သူအပါအ၀င် မိန်းကလေးများကို အကြံပေးချင်တာကတော့ ယောကျာ်းလေးများနှင့် အရုပ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မအပ်စပ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ချစ်သူလေးကိုလည်း ဒီဘလော့လေးကို ဖတ်ပြီး သိစေချင်တယ် (ကိုယ်တိုင်တော့ မပြောရဲဘူး။) ကျွန်တော့်၏ ချစ်သူကိုယ်ပွားလေး...........နားလည်ပေးနိုင်ပါစေ။
Posted by Army Soul at 4:22 AM7comments
Posted by Army Soul at 10:58 PM7comments
မနေ့က စခန်းစစ်ထွက်ရမည်ဆိုသောကြောင့် လှည်းကူးတစ်ဝိုက်ကို ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အလုပ်တာဝန် ခဏနားချိန်တွင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောဖူးသော မရမ်းချောင်းဆိုသော ရွာကလေးဆီသို့ ဆိုင်ကယ်လေးဖြင့် ထွက်ခဲ့လိုက်သည်။ ကတ္တာရာလမ်းမကြီးမဟုတ်သော်လည်း မြေသားသိပ်နေပြီဖြစ်သော ခြောက်လမ်းသွားလမ်းမဟောင်းကြီးသည် မည်သည့်နေရာမှ စ၍၊ မည်သည့်နေရာတွင် ဆုံးသည် မသိ။ သို့သော် ကျွန်တော်သွားလိုသော မရမ်းချောင်းရွာကလေးဆီကိုတော့ ချောချောမွေ့မွေ့ပင်ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ ရွာအ၀င်နားလေးတွင်ပင် လမ်း၏ ဘယ်ဖက်အခြမ်းတွင် ပရဟိတ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာဆိုသည် ဆိုင်းဘုတ်အပြာရောင်ကြီးပေါ်တွင် အဖြူရောင်စာလုံးများ ရေးထွင်းထားသော ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကို တွေ့မြင်ရသည်။
ဂေဟာလေးကတော့ ဘားတိုက်ပုံစံ “ဂ”ငယ်ပုံဆောက်လုပ်ထားသော အဆောက်အအုံဖြစ်ပြီး အလည်မြေလွတ်တွင် သက်ကယ်မိုးထားသော မြေတလင်းကို ခန်းမအသွင် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ထိုဂေဟာလေးသည် အနာကြီးရောဂါသည်များကို ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်သော နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရောဂါဝေဒနာများ ပျောက်ဆုံးသွားကြပြီ ဖြစ်သော်လည်း၊ ဝေဒနာဖြစ်ပွားစဉ်က ရရှိခဲ့သော ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည့် ခြေလက်များ ကွေးကောက်ခြင်း၊ နှာခေါင်းရိုးများတိုဝင်သွားခြင်း၊ လက်ချောင်းခြေချောင်းများမရှိတော့အောင် ဆိုးရွားခဲ့သည့် လူ့ဘ၀အကျည်းတန်မှုများကို ခံစားနေကြရသော သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် လူလတ်ပိုင်း အသက်၄၅ နှစ်ပိုင်းလောက် လူများကို တွေ့ရသည်။ ဂေဟာစည်းကမ်းအရ မြို့ရွာများသို့ သွားရောက်ကာ တောင်းရမ်းစားသောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ထားကာ နိုင်ငံတော်အစိုးရက မတည်ငွေနှင့် စေတနာရှင် အချို့၏ လှူဒါန်းမှုများ၏ အတိုးအညွန့်များဖြင့် ဂေဟာရှိ ရောဂါဝေဒနာခံစားခဲ့ရသော ဝေဒနာရှင်များကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားပါသည်။
တစ်နိုင်တစ်ပိုင်အနေဖြင့်လည်း သက်ငယ်သော ဝေဒနာရှင်များက ရွာတွင်းရှိ ဆိတ်ကျောင်းခြင်း၊ တောင်းယက်ခြင်း၊ အင်္ကျီချုပ်ခြင်းစသည်များကို လုပ်ကိုင်၍ အခြားဝေဒနာရှင် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို စောင့်ရှောက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း ထိုအကြောင်း အခြင်းအရာများကို တွေ့ရသော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်မှ တပါးအခြားမတတ်နိုင်။ ကျွန်တော့်ရသည့် လစာလေးထဲမှ ဖဲ့လှူသော်လည်း အရာမရောက်။ တပ်သို့ပြန်ရောက်သည်အထိ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ နောက်ဆုံးသူငယ်ချင်းမလေးဆီသို့ ဖုန်းဆက်ပြီး ထိုအကြောင်းအရာများကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်မိသည်။ မကြာလိုက်ပါ.. နောက်နှစ်ရက် မြောက်သောနေ့ တစ်ခုသော မနက်တွင် ကျွန်တော့်ကို ရဲဘော်လေးတစ်ယောက်က ရိပ်သာသို့ ပြေးလာခေါ်သည်။ သူငယ်ချင်းမလေးဆီကဖုန်းလာသည်တဲ့ ပြန်ဆက်မယ်တဲ့..
သူမ ပြန်ဆက်လာပါသည်။ မနက်ဖြန် သူမမိသားစုနှင့်တကွ သူငယ်ချင်းအချို့နှင့်အတူ မရမ်းချောင်း ပရဟိတသို့ လာရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း လမ်းတ၀က်မှ စောင့်နိုင်လျှင်စောင့်ပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာသည်။ ကျွန်တော်အလွန်တရာ ၀မ်းသာမိသည်။ မိမိမလှူဒါန်းနိုင်သော်လည်း နတ်လမ်းညွှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ချင်တော့ မနက်ဖြန်စခန်းစစ်ကရှိပြန်သည်။ သို့သော်လည်း တပ်ရင်းမှူးကို အကြောင်းစုံရှင်းပြပြီး မရမ်းချောင်းမှ အပြန်စခန်းစစ်ဝင်ခဲ့ပါမည့်အကြောင်း တင်ပြကာ သူငယ်ချင်းမလေးတို့လာမည့်လမ်းတွင် အပြေးသွားစောင့်ရပါသည်။ သူငယ်ချင်းမလေးတို့နှင့် အတူ ပရဟိတဂေဟာသို့ ဒုတိယအကြိမ်ရောက်ရှိခဲ့ပြန်ပါသည်။ သူမတို့ယူဆောင်လာသော လှူဒါန်းမည့် ပစ္စည်းများက တစ်ယောက်အိပ်ကိုးရီးယားစောင် တစ်ယောက်တစ်ထည်နှုံးဖြင့် စောင်(၅၄)ထည်၊ ဒန်ပေါက်ပွဲ(၆၀)နှင့် ငွေသားတစ်ဦးကို (၁၀၀၀)ကျပ်နှုံးဖြင့် လှူဒါန်းသွားကြပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ငွေကြေးအားဖြင့် မပါဝင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ကာယအားဖြင့်သာ ပါဝင်ကူညီနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဂေဟာတွင်နေထိုင်သူ ဝေဒနာရှင် စုစုပေါင်း(၅၀)ဦးရှိပါသည်။ ရွာထဲတွင် မိသားစုဖြင့်အတူတကွနေထိုင်သူ ဝေဒနာရှင် စုစုပေါင်း(၃၀)ဦးရှိပါသည်။ မရမ်းချောင်းရွာလေးတွင် အနာကြီးရောဂါဝေဒနာခံစားခဲ့ရသော လူဦးရေ(လက်ရှိစာရင်းများအရ) စုစုပေါင်း (၈၀)ဦးရှိပါသည်။
ထိုသို့သွားရောက်လှူဒါန်းချိန်တွင် အနာကြီးရောဂါဝေဒနာခံစားခဲ့ရသော ဝေဒနာရှင်တစ်ဦးက ဆွမ်းခံကြွသော ကိုရင်လေးနှစ်ပါးကို ဆွမ်းလောင်းလှူနေသော မြင်ကွင်းသည် ကျွန်တော့် မျက်စိထဲတွင် မထွက်နိုင်ပါ။ ရောဂါ၏တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လက်ချောင်းလေးများကွေးကောက်နေသော်လည်း ကြိုးစားပြီး မြေပြင်တွင် ၀ပ်ဆင်းကာ ထိခြင်းငါးပါးဖြင့်ကန်တော့နေသော…. ဝေဒနာရှင်တစ်ဦး။ ။
အနာကြီးရောဂါဝေဒနာရှင်များကို လူ့ဘောင်လောကမှ ပစ်ပယ်ထားခြင်းမပြုပဲ……အားငယ်သူများကို အားပေးခြင်းဖြင့် လူ့ဘောင်လောကကြီး သာယာလာအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
လှည်းကူးမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၆၀၀၂၆၁
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန။ ဖုန်း - ၆၆၃၃၉၂
အမှတ်(၁၉၄)၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားလမ်း။ ဖုန်း -၂၉၂၆၁၁
လှည်းကူးမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၆၂၉၀၃၈
[အထက်ဖော်ပြပါလိပ်စာများသည် ထိုဂေဟာမှပေးလိုက်သော လက်ကမ်းစာစောင်မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ]
Posted by Army Soul at 1:16 AM7comments
၁၇၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ကျရောက်မည့် စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ်(၄၇)တို့၏ ကျောင်းဆင်းပွဲအထိမ်းအမှတ်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုရေးသားရင်း ညီမလေးDream Tag ထားတဲ့ "အကြိုက်ဆုံးကဗျာ"လေးအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by Army Soul at 3:31 AM 8 comments
Posted by Army Soul at 8:42 PM 8 comments
Posted by Army Soul at 4:31 PM4comments
Posted by Army Soul at 11:15 AM 10 comments
Posted by Army Soul at 11:30 PM5comments
Posted by Army Soul at 12:17 AM 1 comments
ယနေ့တော့ ရာသီဥတုက သာယာနေသေးသည်။ ဥတုရာသီတောကိုမှီဆိုသည်မှာ ဟုတ်မှန်ပေလိမ့်မည်။ ချင်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းချုံနေသော ဖောင်းပြင်မြို့လေးတွင် မိန်းကလေးအရွယ်စုံများက ချင်းတပတ်လေးများကို ခြုံကာ ဆောင်းရာသီဖက်ရှင်ကို တွေ့မြင်နေရသည်။ မနေ့ကအထိ ချွေးတောက်တောက်ကျအောင် ပြေးလွှားလုပ်ကိုင် နေရသော ပင်ပန်းမှုများသည် လှေဆိုက်သို့ မော်တော်ဆိုက်ကပ်ချိန်တွင် နွမ်းနယ်မှုများ ပျောက်ကင်းသွားသလိုပင် ခံစားလိုက်ရသည်။ ကျွန်တော့်ဘ၀တွင် ဤကဲ့သို့သော ခံစားမှုမျိုးကို မကြုံလိုက်ရပါ။ နိုင်ငံတော်အလံကို လွှင့်ထူ၍ မော်တော်ပေါ်မှ ဆင်းသက်လာကျသော.....
ကျွန်တော်တို့တပ်မှ အရာရှိ၊အရာခံ၊ အကြပ်စစ်သည်များအားလုံး၏ ပြုံးပျော်ရွှင်သော မျက်နှာများကို မြင်ရသည်မှာ ရင်ထဲတွင် အေးမြလှသည်။ မြို့ခံလူထုကလည်း လက်ခုပ်သြဘာများတီးကာ ကြိုဆိုကြသောကြောင့် အားတက်ဖွယ်မြင်ကွင်းများပင်ဖြစ်သည်။ တပ်ရင်းမှူးကို အလေးပြုရင်း နောက်ဖက်မှ ဆင်းသက်လာသော စစ်သည်များကို လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ ရင်းမှူးက ခေါင်းကိုသာ တချက်ငြိမ့်ပြပြီး မော်တော်ယာဉ်များ ရပ်နားထားရာသို့ ဆက်လက်ချီတက်သွားလေသည်။
မော်တော်ယာဉ်များ တပ်ဂိတ်ဝကို မြင်နေရလောက်သည့်နေရာအရောက်တွင်ပဲ ရှေ့တန်းပြန်စစ်သည်များကို ကြိုဆိုစောင့်မျှော်နေကြသော အိမ်သူသက်ထားဇနီးမယားများနှင့် သားသမီးများက အိုးစည်ဗုံးမောင်းများ တီးခတ်၍ သပြေခက်များဖြင့် ကြိုဆိုကြလေသည်။ တပ်တွင်းသို လမ်းလျှောက်ဝင်ရောက်ချိန်တွင် ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ကြည့်ဖူးသော ဝေလည်းမွှေး၊ ကြွေလည်းမွှေးဇာတ်လမ်းထဲမှာသာ ဇာတ်ဝင်ခန်းအဖြစ်ကြည့်ခဲ့ရသော မြင်ကွင်းသည် ယခုအခါ ကျွန်တော့်ရှေ့တွင် ဖြစ်ပျက်နေသည်။ ငိုသူငို၊ ပျော်သူပျော်.. သားကဆွဲ သမီးကတွဲနှင့် မိသားစုပြန်လည်ဆုံစည်းပုံများသည် အေးမြသော မြင်ကွင်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း....... လွန်ခဲ့သောနှစ်များ ဒီလိုအချိန်က ကျွန်တော်၏ သူငယ်ချင်းသည် ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုနေရာတွင်ပင် ကျွန်တော့်ကဲ့သို့စောင့်စားနေခဲ့ပေလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်တွင်တော့ ကျွန်တော်၏သူငယ်ချင်း ဗိုလ်အောင်ကိုမင်းထင် တစ်ယောက်သည်လည်း တပ်မတော်အရိုးရောဂါကုဆေးရုံ ကုတင်(၅၀၀)တွင် ကျွန်တော့်တုန်းကကဲ့သို့ပင် ပြတင်းပေါက်ဆီမှ လှန်းမြင်နေရသော ကျိုက္ကလို့စေတီတော်ကြီးကို ဖူးမျှော်ကောင်း ဖူးမျှော်နေလောက်ပြီ...
သြ... ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေက ကျရာတာဝန်ကို ကျရာနေရာမှာ ထမ်းဆောင်နေကျသော တပ်မတော်သားစစ်သည်များဘ၀ကို စဉ်းစားမိရင်း တပ်ရင်းရုံးသို့ အပြေးတစ်ပိုင်းထွက်လာမိခဲ့သည်။
(တိုက်ပွဲတွင် အသက်ကို ပဓါနမထားပဲ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ခဲ့သော စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ်(၄၇)ဆင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သို့ အမှတ်တရပါ။)
နောင်တစ်ခေတ်၏ အောင်စစ်သည်။ ။
Posted by Army Soul at 3:05 PM2comments
အေးမြသော ဆောင်းရာသီအချိန်လေးတွင် ကျွန်တော်သည် ချယ်ရီမြေဟုတင်စားခေါ်ကြသော တောင်ပေါ်မြို့ကလေးဖြစ်သည့် ပြင်ဦးလွင်မြို့ကို ရောက်ရှိလာပါသည်။ ကျွန်တော် အနှစ်နှစ်အလလ စိတ်ကူးရင်ခဲ့ရသော ကျောင်းတော်ကြီး၏ ပရ၀ုဏ်သည် ထင်ထားသည်ထက်ပင် ကျယ်ပြောကာ အလွန်တရာ ကြည့်ကောင်းလှသည်။ ကျွန်တော့်လို အခြားသော သူများသည်လည်း ရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းစုံဖြင့်သာ ဤကျောင်းတော်ကြီးကို ရောက်ရှိလာကြသည်။ စစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသော အပျော်သည် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သော အခါပျော်သော အပျော်ထက်များစွာသာခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သော အပျော်များဖြင့်.......
ဒေါက်မတင်ရသေးသော ပထမနှစ်ကျောင်းသားလေးများ ကျွန်တော်တို့သည် အထက်မှ ညွန်ကြားချက်များအတိုင်း နေထိုင်ကျင့်ကြံလိုက်နာ စားသောက်ရသည်။ ဗိုလ်လောင်းအစစ်မဟုတ်သေးသော ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းဘ၀တွင် အိမ်ကိုသာ လွမ်းမိသည်။ ကျွန်တော့်အိမ်လေးသည် ရတခတိုင်းဒေသတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာလေးတွင်ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများက အများသုံးတယ်လီဖုန်းကိုသာ အားထားရသော ဒေသလေးဖြစ်သည်။ ဖေဖေနှင့် မေမေသည်လည်း ကျွန်တော် စစ်ဗိုလ်ကြီးဖြစ်လာအောင် အားပေးမှုတွင် ထိပ်ဆုံးမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ထံသို့ ရလျှင်ရသလို ရက်ခြားနီးပါး ဖုန်းဆက်အားပေးကြသည်။ မနေ့ကအဖြစ်အပျက်လေးသည် ကျွန်တော့်ဘ၀တွင် မှတ်မှတ်ရရဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်အပြစ်ပေးခံထိသော အချိန်နှင့် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွင် အမေ့ဆီကဖုန်းလာသည်တဲ့.... ကျွန်တော်စကားမပြောနိုင်အောင် ၀မ်းနည်းမှုတွေ လည်ချောင်းဝတွင် ဆို့နေသည်။
"သား...အဆင်ပြေရဲ့လား။ မေမေပါကွယ်။ သားကို သတိရလို့ကွဲ့။ သား..ဒေါက်တင်ပွဲက xxxxx ရက်ဆို။ အမေတို့ဒေါက်တင်ပွဲကို မလာတော့ဘူး...လာလို့ကုန်မယ့်ပိုက်ဆံကို သား..သုံးလို့ရအောင် အမေတို့ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်။ သား...ချောင်ချောင်လည်လည်လေးသုံးရတာပေါ့။"
ကျွန်တော်...ဘာမှ ပြောမထွက်ပါ။ မေမေ..မလာတော့ဘူးဆိုတာကြားကြားခြင်းပင် ငိုချင်စိတ်က ထိန်းမရတော့ ကျွန်တော် မေမေ့ကို တွေ့ချင်ပါသည်။ မေမေ့လက်လေးဖြင့် ကျွန်တော့်ခေါင်းလေးကို သပ်ပေးကာ သား အရာရာအောင်မြင်ပါစေလို့...ဆုတောင်းပေးတာလေးများကို ခံချင်ပါသည်။
"သား........ငိုနေတယ်...ဟုတ်လား။ သားရယ်..ဘာဖြစ်တာတုန်း။ သား...နေမကောင်းလို့လား။ သား....."
မေမေ့ဆီမှ စိတ်ပူသံဖြင့် ဖုန်းထဲမှ ပလုံးပထွေးကြားနေရသည်။ ကျွန်တော် ပျော့ညံ့မိပါသည်...
"မင်း...ယောကျာင်္းမဟုတ်ဘူးလား။ မင်းဖြစ်ချင်လှပါတယ်ဆိုတဲ့လမ်းကို ရွေးပြီးတော့မှ မင်းက နောင်တမျက်ရည်ကျတာလား။ စစ်သားလုပ်မည့်သူက ဒီလောက်မပျော့ညံ့သင့်ဘူးလေးကွာ။"
"မင်း မှားလို့..မင်း အပြစ်ပေးခံထိတာပဲ။ ဒါကို မျက်ရည်မကျနဲ့လေကွာ။ ဒီမှာ မင်းငိုလို့မင်း အမေက ဖုန်းတောင်မပြောနိုင်တော့ဘူး။ ငိုနေပြီ.. မင်းရဲ့ ဒေါက်တင်ပွဲကို အဖေတို့လာခဲ့ပါတော့မယ်ကွာ။ ဒီမှာက စပါးမရောင်းရသေးတော့ ငွေမပေါ်သေးဘူးကွ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ချ..သား။ အဖေတို့ အရောက်လာခဲ့မယ်..ဟုတ်ပလား။ တိတ်တော့။ ယောကျာင်္းက မျက်ရည်ကျတာ ပျော့ညံ့လို့ကွ။ ဖေဖေတို့မျိုးရိုးမှာ မင်းက ပထမဆုံးစစ်ဗိုလ်ကြီးဖြစ်မယ့်ကောင်ကွ။ အားတင်းထားစမ်းပါကွာ။"
"ဟုတ်...ဖေဖေနှင့် မေမေ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်နော်။"
ဖုန်းလေးကျသွားပါပြီ...ကျွန်တော်လည်း အပြစ်ဒါဏ်ကို လုပ်ဆောင်ရန်သွားရပါတော့မယ်။ သို့သော် ဖုန်းမလာခင်ကခြေလှမ်းနှင့် ယခုခြေလှမ်းတို့မှာ ကွာခြားသွားလေသည်။ ဖေဖေနှင့် မေမေသည် ကျွန်တော်ဗိုလ်လောင်း ပထမနှစ်ကျောင်းသားဘ၀ကို အားပေးခဲ့ကြသော နောင်တစ်ခေတ်၏အောင်စစ်သည်၏ သားကောင်းမိဘများဖြစ်သည်။ ယခုဆိုလျှင် ကျွန်တော့်၏ကျောင်းသားဘ၀သည် ပျော်ရွှင်မှုများဖြင့်သာ ခုတ်မောင်းနေပါသည်။
(ညီလေးဗိုလ်လောင်း အပတ်စဉ် ပထမနှစ်ကျောင်းသားလေး ... အောင်မြင်စွာဖြင့် ထူးချွန်ဆုတစ်ခုကို ရယူနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ညီလေးရဲ့ အမှတ်တရညလေးအကြောင်းကို တင်ပြရေးသားမှုကို နားလည်ပေးပါ။)
Posted by Army Soul at 3:05 AM 1 comments
Posted by Army Soul at 3:02 AM3comments
မနက်နေရောင်အောက်တွင် ခြေအစုံသည် သချိုင်းအ၀တွင် ရပ်မိရင်း... အတွေးတွေကလည်း တစ်ချိန်တုံးက အတိတ်ဆီသို့ရောက်ရှိသွားတော့သည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သော ကျွန်တော့်ကို ဖေဖေနှင့် မေမေက တပ်မတော်ထဲသို့ဝင်ရန် အားပေးကြသည်။ သားကြီးက အရာရှိဝတ်စုံလေးနဲ့ ကျက်သရေရှိမှာပဲလို့ မေမေက တဖွဖွပြောလေသည်။ ကျွန်တော် တပ်မတော်ထဲ မ၀င်ချင်ပါ။ အများနည်းတူ မြကျွန်းညိုညိုတက္ကသိုလ်ဟူသော ရောင်စုံပန်းများဖူးပွင့်နေသော တက္ကသိုလ်ကိုသာ တက်ချင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း မိသားစုထဲတွင် အကြီးဆုံးသားဖြစ်သော ကျွန်တော်က မိဘစကားကို ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ လိုက်နာမှသာလျှင် ညီငယ်၊ ညီမငယ်တို့က ဆုံးမနိုင်မည်သာဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျွန်တော် တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်သို့ရောက်ရှိလာပါတော့သည်။
ပထမနှစ်ကျောင်းသားတို့၏ဘ၀သည် ကျောင်းစတက်ကာစ သူငယ်တန်းကျောင်းသားလေး ကျောင်းစတက်သလို မချိုမြိန်ပါ။ အကြီးအငယ်အုပ်ချူပ်ရသောစနစ်ဖြစ်သောကြောင့် အချို့အချို့သော ကိစ္စများတွင် ပြန်ပြောခွင့်မရအောင်ကို အမိန့်နာခံရသည်။ ယောကျာ်းတန်မဲ့ မျက်ရည်ကျသလားမေးလျှင်..ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျပါသည်။ ခါးသည်းမှုတွေကို ကြုံရတိုင်း ဖေဖေနှင့်မေမေကို ကျေးဇူးဆပ်ချင်သောစိတ်ကြောင့်သာ စစ်ထဲဝင်လာတာပဲဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားတင်းရင်းမျက်ရည်များဖြင့် အိပ်စက်ခဲ့ရသော ညတွေသည် တတိယနှစ်အရောက်တွင် ခန်းခြောက်စပြုလာပါသည်။
ကျွန်တော်ချစ်ရပါသော မေမေသည် ကျွန်တော့်တို့ကို လောကကြီးထဲတွင်ထားခဲ့တော့သည်။ မေမေ့ဈာပနကို အမှီပြန်ခွင့်တော့ ကျွန်တော်ရခဲ့ပါသည်။ အထီးကျန်မှုတွေဖြင့် ကျွန်တော် တစ်နှစ်ကျော်ဖြတ်လာနိုင်ချိန်.... စတုတ္ထနှစ်လယ်တွင် ရန်ကုန်သို့ကွင်းဆင်းလေ့လာရေးသွားရပါသည်။ လေ့လာရေးပြီး၍ ကျောင်းသို့ပြန်ရောက်သော အခါတွင် ကျွန်တော်ရူးသွပ်သွား မတတ်ခံစားရပါတော့သည်။ ဖေဖေ့ရက်လည် ဆွမ်းသွတ်သောနေ့ကိုသာ ကျွန်တော်မှီလိုက်ပါတော့သည်။ ကျွန်တော် ဘာဆက်လုပ်ရတော့မလည်း မည်သူ့ကို ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ စစ်ထဲဝင်လာတာလည်း ကျွန်တော်မေးခွန်ပေါင်းများစွာဖြင့် ဖေဖေနှင့်မေမေအုတ်ဂူတို့ကို ကန်တော့ကာ ကျွန်တော်ကျောင်းတော်ကြီးသို့ပြန်လာရပါတော့သည်။
ဒီဇင်ဘာနှင်းမှုန်လေးတွေကြားမှာ ကျောင်းဆင်းပွဲဟူသော နေ့တစ်နေ့ထိတိုင် ကျွန်တော် ဤကျောင်းတော်ကြီးတွင် ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါသည်။ လစ်လပ်နေသောမိဘထိုင်ခုံလေးက ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင် ဖေဖေနှင့်မေမေပြုံး၍ကြည့်နေသည်ဟု ခံစားမိသည်။
"ကိုကြီး...ဘာတွေရပ်ပြီး စဉ်းစားနေတာတုံး.. ၀င်ရအောင်လေ" ညီမလေးက ကျွန်တော့်လက်ကို ဆွဲရင်းသချိုင်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့ကြသည်။ ညီငယ်သုံးယောက်နှင့် ညီမလေးကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျမိသည်။ ဖေဖေနှင့်မေမေ သားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမှာ ညီလေးတို့ ညီမလေးတို့တင် မဟုတ်တော့ပါဘူး...နိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးကိုပါ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရတော့မှာပါ။
ဖေဖေနှင့်မေမေ... သားအခု အရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ပါပြီ။ မေမေမြင်ချင်တဲ့ အရာရှိဝတ်စုံနဲ့သား မေမေတို့ရှေ့ကိုရောက်နေပါပြီ။
"ဖေဖေနှင့်မေမေတို့ကျေးဇူးကို ဆပ်ဖို့သားတပ်မတော်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် ဆက်ကြိုးစားပါ့မည်။" ဖေဖေနှင့်မေမေ ကြားနိုင်ကြပါစေ။ ။
(အားငယ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ဒီအကြောင်းအရာလေးဖြင့် အားပေးခဲ့တဲ့ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် အပတ်စဉ်-၈ မှ အစ်ကို့ကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ )
Posted by Army Soul at 3:01 AM 1 comments
Posted by Army Soul at 2:59 AM2comments
ကရင်ပြည်နယ်ဒေသလေးတစ်ခုတွင် လုံခြုံရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေရချိန် ချစ်သူ၊ ခင်သူ၊ မိဘဆွေမျိုးမောင်နှမများ နဲ့ဝေးကွာနေသော ကာလလေးသည် လွမ်းဆွေးမှုတွေနှင့် တာဝန်ဟူသော အရာနှစ်ခု ပြည့်နှက်နေသော ရက်များဖြစ်သည်။ နောက်တန်းမှရောက်လာသော စာလွှာလေးများသည်သာ တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းနေမှုများကို အဝေးသို့ လွှင့်စင်စေပါသည်။ အကြင်ချစ်သူမရှိသော ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် စာဆိုသည်မှာ တော်တော်စဉ်းစားရသည်။ ကံကောင်းချင်သောရက်လေးကို ရောက်လာပါသည်။ ရဲဘော်တစ်ဦးက ကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ စာလေးတစ်စောင်ကို ယူဆောင်လာပေးပါတယ်။
ပေးပို့သောစာလွှာရှင်လေးနံမည်လေးက မကြာသေးမီက ခင်မင်ခွင့်ရလိုက်သော ညီအစ်မနှစ်ယောက်... ကျွန်တော်ဝမ်းသာမှုများနှင့် ရင်ခုန်မှုတွေပါ စာလေးကို ဖွင့်လိုက်မိသည်။.....
စာထဲကအကြောင်းအရာလေးတွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ ရင်ထဲမှာ ယားကျိကျိဖြစ်လာတယ်။ တော်တော်ကို ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့စာလေးပေါ့ ယားကျိကျိတောင် ခံစားရတယ်ဆိုတော့။ နောက်တော့ လက်တွေပါယားလာတာ။ တစ်ကိုယ်လုံးကို ယားလာတော့တာပါပဲ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ရေပြေးချိူးလိုက်ရတော့တယ်။ စာလေးကို သေချာစွာဖတ်ကြည်တော့မှ အောက်ဆုံးတွင် သတိပေးစကားပါ ပါတယ်။ "ခွေးလျားသီးမှုန့်ပါသည်" တဲ့လေ။ ဘယ်လိုမှကို အပြစ်မြင်လို့မရဘူး။ သူတို့ရဲ့စာလေးကြောင့် ပင်ပန်းနေသော ကျွန်တော်တင်မက ကျွန်တော့်တပ်ခွဲတစ်ခုလုံး တသောသောရယ်နိုင်တော့သည်။ ညီမလေးနှစ်ယောက်ကို ဒီအကြောင်းရာလေးကို စဉ်းစားမိတိုင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by Army Soul at 2:57 AM2comments
တစ်ခါတုန်းက မိတ်ဆွေတချို့က "မင်း ကတော့ ကံကောင်းတယ်ကွာ ကျည်ဝေးရာ တိုင်းတပ်မှာ ပန်ကာလေးနဲ့ ကောင်းလိုက်တာတဲ့ "စစ်သားတွေဆိုရင် လူတွေက စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်.. ချို့ချို့တဲ့တဲ့ပဲ မြင်ချင်တယ်ထင်တယ်။ ကောင်းကောင်းလေးနေရရင် ပြောချင်လာတယ်။ ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တာကတော့ အမေပေးတဲ့ မီးအိမ်အိုလေးနှင့် ရေဒီယိုတစ်လုံးပါ။ အခု ကျွန်တော် စခန်းစစ်ထွက်လာတာ တစ်ပတ်ကျော်ပြီ.. စခန်းအားလုံးလည်း ပြီးသလောက်ရှိပါပြီ။ ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့ ပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ပေါ့။ စခန်းစစ်ဆိုပေမယ့် ကျော့ကျော့လေး စစ်ရတာတော့ မဟုတ်ပါ။ စစ်ဆင်ရေးထွက်သကဲ့သို့ အစစအရာရာ တစ်စခန်းပြောင်း တစ်စခန်းသတိထားရပါသည်။ ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသွားရမယ့် နေရာကတော့ ကဗျာစာချိုးလေးနဲ့ နေရာပါပဲ... ၁၉ ဖာပွန် တမလွန် ဆိုသော..နေရာလေးပေါ့
အသွားမှာပေါ့ ကလေးတွေပြောသလို နိုး ပလုံ ပလုံပေါ့။ အပြန်မှာပေါ့ အဲဒီမှာ စတွေ့တာပဲ ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ ပစ်ခတ်မှုနဲ့ဆုံပါသည်။ ကံကောင်းချင်တော့ အမေ့သားလေး.. အမေပို့သသော မေတ္တာကြောင့် ဘေးမသီရန်မခ အေးဆေးစွာ ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ တပ်ရောက်သည်နှင့်လည်း မိန်းမယူရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အခြားတော့ မဟုတ်ပါ.. ကျွန်တော့ ညီမလေးပြောသော ငှက်ပျောတုံးဖက်ရမှာကို စိုးပါသည်။
ဒါပေမယ့်လည်း ညီမလေးရယ်... အစ်ကိုတို့က စစ်သားတွေပါ။ အစ်ကိုတို့ဘ၀ကို နားလည်ပေးမယ့် အိမ်သူသက်ထားကို ရဖို့ဆိုတာ မဟူရာညမှာ အပ်ပျောက်ရှာရတာပါ။ ဖူးစာဆိုတာ ဦးရာလူ ဆိုတော့ အစ်ကိုတို့စစ်သားတွေက တာဝန်တွေဆိုတာ နေ့ရောညပါလေ.. ဘယ်နားမှာ ဦးချိန်ရမှာတုန်းကွာ။ မိန်းမယူထားသော သူငယ်ချင်းများရဲ့ အိမ်သူသက်ထားများကိုလည်း လေးစားမိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ဘ၀ကိုလည်း အားကျရင်း ဘာရယ်မဟုတ် ကျွန်တော့်ဖူးစာရှင်လေးကို ရေဒီယိုလေးကို နားထောင်ရင်း အမေပေးတဲ့ မီးအိမ်အိုလေးဖြင့် မီးခွက်ထွန်းရှာနေကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
[ရတခမှ အစ်ကိုတစ်ယောက်အကြောင်း တစေ့တစောင်း]
Posted by Army Soul at 2:54 AM 1 comments
ပန်းကုံးလေးကမ်းပေးသော လက်လေးတစ်စုံကို တောင့်တမိသည်။ ကျေးဇူးပါပဲဟု မပြောခဲ့မိသော...လွန်ခဲ့သော အတိတ်နေ့တွေဆီက အကြောင်းအရာက မနေ့တစ်နေ့ကလိုလို.... ကျွန်တော် စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းပြီးလို့တာဝန်ကျရာတပ်ရင်းတစ်ခုကို ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ကံကောင်းချင်သော ကျွန်တော်..တော်လှန်ရေးချီတပ်လမ်းလျှောက်ခြင်းမှာ ပါဝင်ရမည်ဆိုသော ကြေးနန်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ကို ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ သူမနှင့် ကျွန်တော်ဆုံစည်းရန် ဖြစ်ချင်လာတော့ ထိုဆိုင်ကလေးမှာ ကျွန်တော် ထမင်းစားရင်းက ဆုံစည်းခွင့်ရခဲ့သည်။ rehersal နေ့တွေမှာတော့ သူမလာလာကြည့်နေသည်ကိုတော့ အမှတ်မထင်တွေ့မိသည်။
ဤသို့ဖြင့်တပ်မတော်နေ့သို့ရောက်လာခဲ့ရာ ကျွန်တော်ချီတပ်လမ်းလျှောက်သော စစ်ကြောင်းကို သူမ လူအုပ်ကြားမှ ကြိုးစားပမ်းစားရှာနေပုံလေးကို ယနေ့ထိပြန်မြင်ယောင်မိသည်။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းကျော်ခံနီးလေးတွင် သူမ ကျွန်တော့်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါသည်။ သို့သော်လည်း သူမ၏လက်ထဲမှ ပန်းကုံးကလေးသည် ကျွန်တော်ထံရောက်မလာနိုင်တော့ပါ...နောက်မှ စစ်ကြောင်းများက ဆက်တိုက်ပါလာသောကြောင့် သူမလူအုပ်ကြားထဲမှ ထွက်လာချိန်တွင် မမှီလိုက်တော့ပါ.... မျက်ရည်များဖြင့်ပြည့်လျှံနေသော သူမမျက်ဝန်းလေးကို ကျွန်တော့်မျက်စိဒေါက်မှသာ တွေ့လိုက်ရသည်။ စိတ်မကောင်းပါဘူး..ညီမလေးရယ်။
တော်လှန်ရေးနေ့ပြီး၍ တပ်ဆီသို့ပြန်ရမည့်နေ့တွင် ကားများနားသို့ သူမရောက်လာပါသည်။ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းပေးလိုက်သော ဘူးလေးတစ်ခု..ထိုအချိန်က ကျွန်တော်သူ့ကို ဘာမှပြန်မပြောခဲ့မိပဲ...စွံ့အစွာပင် ဘူးလေးကို ယူထားလိုက်မိသည်။ တပ်ပြန်ရာလမ်းတစ်လျှောက် ရထားပေါ်တွင် ဘူးလေးကို ဖွင့်ကြည့်မိသောအခါ... ပန်းကုံးလေးတစ်ခုထွက်လာပါသည်...စာတစ်စောင်ကတော့..အစ်ကို့အတွက်ဟုသာ မင်နက်နက်လေးဖြင့်ရေးထားသည်။ သူမရေးပေးလိုက်သော မင်နက်နက်လေးသည် စက္ကူပေါ်တွင်သာ ထင်ရှားခြင်းမဟုတ်ပဲ..ကျွန်တော့်အတွေးအာရုံတွင်ပါ ထင်ရှားနေသည်ကို ကျွန်တော်နှင့်သူမ ကွဲကွာခဲ့ပြီး (၄)နှစ်လွန်သည်အထိ ရှိနေသေးသည်ကို..သူမသိနိုင်ပါစေ။ အမိမြေကို ပြန်လာချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကို ပန်းကုံးလေးဖြင့် ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် သူမရှိနေခဲ့ပါလျှင်..မည်မျှကောင်းမည်နည်းဟု တွေးတောရင်းဖြင့် နံရံပေါ်ရှိ ပြက္ခဒိန်ရက်လေးကို တစ်ရက်ခြစ်လိုက်မိသည်....
[ခံစားချက်တစ်ခုကို အမှတ်မထင်ပြောပြပေးခဲ့သော MATIမှအစ်ကို ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။]
Posted by Army Soul at 2:52 AM0comments
ကျွန်တော်တို့တပ် ရှေ့တန်းက ပြန်သ်ိမ်းလာပြီ။ ရန်ကုန်မှာ စက်တင်ဘာအရေးအခင်း မငြိမ်မသက်ဖြစ်တာရော၊ ကျွန်တော်တို့တပ်ခွဲကို နောက်တပ်ခွဲတစ်ခုနဲ့လဲတာရောကြောင့် နောက်တန်းကို ပြန်ဝင်လာရတယ်။ အိမ်က ဇနီးနှင့် သမီးမျက်နှာကိုတောင် မတွေ့ရသေး...စခန်းရုံးက ထပ်မံပေးအပ်လိုက်တဲ့ နောက်တာဝန်တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ဖို့ အသင့်ပြင်ရတော့မည်။ အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက် ကြားလိုက်ရသော အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့် တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။
စစ်သားတွေကို ဘယ်ဂြိုလ်က ကျလာတာလည်း၊ သူတို့ကိုရော အဖေ အမေကမွေးတာ မဟုတ်ဘူးလား အစသဖြင့် ပြောဆိုနေတာတွေကို ကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ စစ်သားဆိုတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေပါ။ အမိန့်ကို နာခံရမယ်။ နိုင်ငံကို ကာကွယ်ရမယ်။ ဘယ်မင်းတက်တက် ဘယ်အစိုးရတက်တက် ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကို ကျေပွန်ရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဗိုလ်လောင်းဘ၀ကတည်းက ထမင်းမစားခင်တောင် ရွတ်ဆိုရတဲ့ သစ္စာအဓိဌာန်(၄)ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နေသည်မှာ...
ဘယ်ဂြိုလ်က ကျလာတဲ့ အကောင်တွေဆိုတဲ့ စကားလုံးဘ၀အောက်ကို ရောက်ကုန်ပြီလား ... ရန်ကုန်မှာ ဒီအခြေအနေရောက်လာတော့မှ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာ ချစ်သူ ခင်သူကို ခွဲခွာပြီး အသက်တွေ ချွေးတွေရင်းပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတာတွေက မြူမှုန်လို ပျောက်ကွဲသွားပြီလား။ ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေစွန့်လွှတ်လိုက်ရသော စစ်သားတွေနှင့် ကျွန်တော်တို့တွေက ဘယ်ဂြိုလ်က ကျလာတဲ့ အကောင်တွေလည်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလား ?????
အတွေးတွေနဲ့လျှောက်လာရင်း အိမ်ရှေ့အရောက်တွင်...ကျွန်တော်အသက်မသေပဲ ပြန်လာတာကို အိမ်ဝမှာ စောင့်နေတဲ့ မျက်ရည်စက်လက်မျက်နှာလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီး၊ လောကကြီးအကြောင်းကို ဘာမှသေချာမသိသေးတဲ့ ကျွန်တော့်သမီး ...
ညစ်ပတ်ပေကျံနေသော ကျွန်တော့်ယူနီဖောင်းရင်ခွင်ဆီကို ဖေဖေ ဟုအော်ကာပြေးဝင်လာသော သမီးလေးမျက်နှာကိုကြည့်ရင်း ဒေါသတရားများကွယ်ပျောက်သွားသည်။ ဘယ်လိုပင်ခံစားနေရပါစေ ကျွန်တော့်တာဝန်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေရမှာပါ။ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးကို မကျဆုံးရအောင် အားပေးနေသော ကျွန်တော့်သမီးနှင့် ဇနီးကတော့ အကောင်းဆုံး အားဆေးတစ်ခွက်ပါ..
Posted by Army Soul at 2:49 AM4comments
"လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူး။ မင်းအဓိပ္ပာယ်မရှိတာမပြောနဲ့ ...မင်းက မေမေတို့ရဲ့တစ်ဦးသော သား။ မင်းကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး " မေမေကတော့ ပြတ်သားစွာပင်ပိတ်ပင်နေပြီ။ ဖေဖေ ဆီမှနောက်ဆုံး အသက်ကယ်ဆေး အနေနဲ့ လျှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။
"သား...စစ်သားဘ၀ဆိုတာ မင်းထင်သလို မလွယ်ဘူးနော်။ မင်းဆင်းရဲဒုက္ခခံနိုင်လို့လား။ မင်းစစ်ထဲဝင်ချင်တင်ဆိုရင်တောင် တပ်မတော်စစ်ဆေးကို ၀င်ပေါ့။ မင်းအဖေနှင့် အမေက ဆရာဝန်တွေဆိုတာ မမေ့နဲ့အုံး။ " ဖေဖေထံမှရလိုက်သော စကားကတော့ အားပေးမှုမပါ။
"ဖေဖေကတောင် စစ်သားတွေဘ၀ကို ဆင်းရဲဒုက္ခလို့မြင်ရင်.. အခုဝင်နေတဲ့သူတွေကို ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းလည်း..သားကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လုံးဝမပြင်ဘူး။" ထိုကဲ့သို့အတိုက်အခံများဖြင့်......
သူစစ်တက္ကသိုလ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးတည်းသောသားဟူသော ဘ၀တွင် ပျင်းစရာကောင်းခဲ့သော သူ့ဘ၀တွင် ချစ်ခင်လေးစားရသော အစ်ကိုတွေ၊ ညီတွေရခဲ့ပါတယ်။
(၃)နှစ်ပြည့်မြောက်လို့ကျောင်းဆင်းပွဲနေ့တွင် မေမေကတော့ မျက်ရည်များဖြင့်သာ ထွက်ဖို့ကို တတွင်တွင်ပြောနေသေးသည်။
"သားရယ်.. မေမေစိတ်မချဘူး။ ထွက်လိုက်ပါလား"
"မေမေ.. သေမယ့်သူချင်း အတူတူ မြတ်သော သေခြင်းနဲ့သာ သေချင်တယ်။ သားအသက်နှင့် ခန္ဓာကို သားပေးလှူထားပြီးသားပါ။ သား သေမှာမကြောက်တော့ပါဘူး။ သေရင်မြေကြီး၊ ရှင်ရင်ရွှေထီးပါ..မေမေ"
ကျောင်းဆင်းပြီးသောအခါ တာဝန်ကျရာနေရာသို့သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် စာရေးသူထံသို့ သူအဆင်ပြေကြောင်း၊ သူ့ဘ၀ကို သူကျေနပ်ကြောင်း စာလေးများရောက်ရောက်လာပါသည်။
မိုးအကုန်ဆောင်းအကူးကာလလေးမှာတော့ မမျှော်လင့်သော သတင်းတစ်ခုကြားလိုက်ရသည်။ စာရေးသူ၏ သူငယ်ချင်းတိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးသောသတင်းကရောက်ရှိလာပါသည်။ သူ၏ဈာပနကို မအားသည့်ကြားက ရောက်အောင်သွားလိုက်သည်။ သူငယ်ချင်းရေ... မင်းပြောတဲ့ မြတ်သော သေခြင်းပါပဲ။ မင်းကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ သေနတ်ပစ်ဖျောက်သံတွေကို မင်းကြားရ ရဲ့လားကွာ။ မင်းပြောခဲ့ဘူးတဲ့ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် မြတ်သောသေခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဆိုတာကို မင်းက သက်သေပြသွားတာလား..
[တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးသွားသော စစ်တက္ကသိုလ်သင်တန်းအမှတ်စဉ်-၄၇ မှ သူငယ်ချင်းကိုရည်စူးရင်း..]
Posted by Army Soul at 2:42 AM0comments
ညီမလေးစကားကိုကြားတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ အစ်ကိုလေးတို့က နိုင်ငံခြားမှာ ပညာတော်သင်ကို အေးအေးဆေးဆေးသင်နိုင်ချိန်မှာ တောထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ စစ်သည်တွေကို ဘယ်သူတွေကမှ မသိဘူး....
ညီမလေးရယ် အစ်ကိုတို့တွေလည်း ဒီဘ၀ကနေ ကျော်ဖြတ်လာသူတွေပါကွာ။ တစ်ချိန်တုံးက မင်းအစ်ကိုဟာလည်း.... သေမင်းတမန်လမ်းက ပြန်လာတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ.... မိုးတွေရယ် ဘာငြိုးကြောင့်များ ဒီလောက်ရွာနေရတာလည်းကွာ။
မနေ့ကဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲတွင် ဒဏ်ရာရလူနာများကို နောက်တန်းပြန်ပို့ပေးရမယ့် အဖွဲ့တွင် ကျွန်တော်က တပ်စုမှုးအဖြစ်လိုက်ပါလာရသည်။ မိုးက သည်းမည်းစွာ ရွာသွန်းသောကြောင့် ထင်သလောက်ခရီးမပေါက်။ ဒဏ်ရာရလူနာများကိုလည်း မကြည့်ရက်၊ သယ်ဆောင် ထမ်းပိုးနေကြသော ရဲဘော်များကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာသည် မြန်မြန်သွားရန် အမိန့်ကိုလည်း မပြောရက်.. ဤသို့ဖြင့် လမ်းခရီးတွင် ရက်တော်တော်ကြာနား၍ ခရီးဆက်ရသောကြောင့် ရိက္ခာကမလောက်တော့ပြီ... မိုးတွေကသည်းသည်းမည်းမည်း အငြိုးကြီးစွာရွာစဲပင်.. ရဲဘော်လေးလာပေးသွားသော ထမင်းကို စားရန်ပင်တော်တော်အဆင်မပြေ မိုးကာခြုံထားသောလည်း လေအဝှေ့တွင် အဆင်ကသိပ်မပြေချင် ဟန်းကောချိုင့်လေးထဲမှ မြေပဲဆန်လေးနှင့် ထမင်းကို ငုံ့လိုက်ချိန်တွင် Jugle Hat ပေါ်မှ ရေများက ချိုင့်ထဲသို့ တလပောာစီးဆင်းသွားတော့သည်။ မြေပဲဆန်လေးတွေက ရေမြှုပ်နေသော ထမင်းပေါ်တွင် ပေါလောပေါလော။ ထမင်းကို လက်တဖက်ဖြင့် ရေပြန်စစ်ရင်း..... မြို့ပေါ်များတွင်တာဝန်ကျနေသော သူငယ်ချင်းများကို သတိရလိုက်သည်။ စစ်သားတွေဘ၀သည် ကျရာတာဝန်ကို ကျရာနေရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရသည်များကို တွေးရင်း ထမင်းအေးအေးလေးများကို ခပ်စားနေမိသည်။
အခုတော့လည်း ပြည်ပနိုင်ငံတွင် ပညာတော်သင်လာနေသော ကျွန်တော်တို့တွေသည် တစ်ချိန်ကလည်း ဒီလိုဘ၀တွေကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာ..ညီမလေး..သိပါစေကွာ။ ။
[ခံစားချက်တွေကို ပြောပြရုံတင်မက ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များကို ရေးသားနေသော အစ်ကိုကြီး နေလွမ်းသူ ကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။]
Posted by Army Soul at 2:35 AM0comments
ကျွန်တော်ဘ၀မှာ ပျော်စရာကောင်းသော ရက်တစ်ရက် ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပါပြီ။ ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်တွေ သေပြီလို့ထင်ခဲ့ရသောနေ့မှ (၂)နှစ်တိတိ ကျော်လွန်သောအခါ...
"ဗိုလ်ကြီး ....... ခင်ဗျားခြေထောက်က ပုံမှန်နီးပါးပြန်ဖြစ်နေပြီပဲ..အံ့သြစရာပဲဗျာ။ ဗိုလ်ကြီးဆေးဆင့်ချအုံးမှာလား..ဒီအတိုင်းဆို " " ဗိုလ်မှူး..တစ်ကယ်လား..၀မ်းသာလိုက်တာ။ ကျွန်တော်အရင်ကလိုတော့ ပြေးရင်မနာတော့ဘူးဆိုတာတော့ သိတယ်။ ဒီလောက်ကြီးထိကောင်းလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားတာ။ ဒီလိုသာဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ဆေးဆင့် မချတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့် အသက်သေသည် အထိ တပ်မတော်ထဲမှာပဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်ချင်ပါတယ်။ " " ကောင်းပါတယ်။ ဒါဆို ဆေးမှတ်တမ်းရေးပေးလိုက်မယ်။ အရမ်းတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့မလုပ်သေးနဲ့ပေါ့ သင်တန်းတွေကတော့ တက်လို့အဆင်ပြေမှာပါ"
ဆရာဝန်ကြီးစကားတွေကို နားထဲမှ မထွက်နိုင်အောင် ပီတိများစွာဖြင့် ကျွန်တော့်ကုတင်ဆီသို့ပြန်လာမိသည်။ ကုတင်ပေါ်တွင်လှဲနေရင်း အတွေးနယ်များကို ချဲ့မိသည်..
"ကိုကြီး..ဒီနေ့ဆေးစစ်တာ အဖြေရပြီ..ညီလေးအောင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ညီလေး မသွားချင်ဘူး။ အမေနှင့် ကိုကြီးကို မခွဲနိုင်ဘူး။ နောက်ပြီး ကိုကြီးခြေထောက်ကလည်းကောင်းတာမဟုတ်တော့ ကျွန်တော်အပြင်မှာပဲ စီးပွားရေးပြန်လုပ်ပေးတော့မယ်ဗျာ"
ကျွန်တော့်လက်သီးက မပြောမဆို ညီလေးနှာခေါင်းရိုးကို ထိမိရက်သားဖြစ်သွားသည်။ ညီလေးကတော့ ကျွန်တော့်အား တွေတွေကြီးသာ စိုက်ကြည့်နေသည်။
"မင်းမို့လို့ပြောရက်တယ် ကိုလေး။ ငါဒါဏ်ရာရတာက ခြေထောက်တစ်ခုတည်းပါကွ ငါမသေသေးပါဘူး။ မင်း..အဖေ့မှာတာတွေကို မေ့သွားပြီလား။ မင်းတိုင်းပြည်အတွက် ဘာတာဝန်ကျေအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီလည်း။ မင်း စစ်တက္ကသိုလ်မှာ (၃)နှစ်လုံးလုံးပညာသင်ခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတရားကို မမေ့နဲ့။ ပညာတော်သင်သွားရတာကိုတောင် မင်းက ဂုဏ်ယူရမှာ။ ငါဒါဏ်ရာရလို့ ငါ့ခြေထောက်စွန့်လွှတ်ရရင်တောင် ငါကျေနပ်တယ်။ အမေနှင့်ငါအတွက်.မင်းစိတ်ပူမနေပါနဲ့ကွာ ...ငါလည်း ခွင့်ရတိုင်း အမေ့ဆီ အမြဲဝင်မှာပါ။ အဖေနှင့် အမေဖြစ်စေချင်တဲ့ ထူးချွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဘ၀ကို မင်းရအောင်ဆက်ကြိုးစားပါ။ "
ညီလေးကတော့ ကျွန်တော့်အား ခေါင်းသာညိတ်ပြပြီး နှုတ်ဆက်ကာပြန်သွားလေသည်။ ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိသည်။ ညီလေးက အမေနှင့်ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်ပူတာကို ကျွန်တော်ဘာကြောင့်များ ထိုးမိပါသနည်း။ ညီလေးအတွေးကလည်းမမှားပါ။ အမေသည် သား(၃)ယောက်ကို လူ့လောကအလယ်တွင် အဖေ မရှိတော့သည့်တိုင် လူတန်းစေ့နေနိုင်အောင် ထားပေးခဲ့သည်။ လူလားမြောက်သော သားနှစ်ယောက်လုံးသည် စစ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဒါဏ်ရာရသည့်တိုင် အမေကတော့ အပြုံးမပျက်သူ့သားများအတွက် ဂုဏ်ယူနေဆဲ....
ကျွန်တော်ခြေထောက်ပြန်ကောင်းလျှင်တောင် စစ်ထဲမှာပဲဆက်လက်အမှုထမ်းချင်သည်ဟု အမေ့ဆီသို့ဖုန်းဆက်ပြောသောအခါ .. သားတို့အတွက် အမေ အမြဲဂုဏ်ယူနေမှာပါဟုပြောရင်း ချောင်းများဆိုးကာ စကားပင်ဆက်မပြောနိုင်တော့သည့် အမေ့အသံကို ကြားရချိန်မှာတောင် ကျွန်တော်စစ်တပ်ကထွက်ဖို့ စိတ်ကူးပင်မရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်နေပြီလားဟု နောက်တနေ့တွင် ဖုန်းပြောသောအခါမေးမိလိုက်ရာတွင်...
" သားရယ်..မင်းတို့ အဖေသွေးတွေက မင်းတို့ကိုယ်မှာ စီးနေတာပါ... မင်းတို့ အဖေတိုက်ပွဲမှာဒါဏ်ရာရပြီး မဆုံးခင်ဆေးရုံမှာ နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ စကား သားးမှတ်မိမှာပါ။"
အဖေ့သားတွေ..မွန်မြတ်သော သေခြင်းကိုသာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ ..... အဖေ့စကားက နားထဲတွင် ပဲ့တင်ထပ်နေသည်။
အဖေ.. သားညီလေးကိုထိုးလိုက်မိတာဟာ စေတနာဒေါသောနဲ့ပါ။ ညီလေးတစ်နေ့နားလည်လာနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ရင်း..ညီလေးဆီသို့.....
Posted by Army Soul at 3:57 AM0comments
ပျောက်ကွယ်သွားသော အလင်းရောင်တန်းတစ်ခုကို ကြည့်ရင်း လစ်လပ်သွားသော နှလုံးသားလေးကို ရင်နာနာဖြင့်သာ လက်ခံလိုက်ရတော့မယ်။ ဘေးဝဲယာမှ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း၊ ရဲဘော်ရဲဘက်များကတော့ တိတ်ဆိတ်စွာပင် ၀င်ခံနီး နေမင်းကြီးကိုသာ ငေးမောကြည့်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေက နေ၀င်ချိန်ရောက်နေပြီလား.....
တိုက်ပွဲတွင် ရလိုက်သော ဒါဏ်ရာကြောင့် ကျွန်တော်ဒီဆေးရုံကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ ရက်တွေလတွေသာ ပြောင်းလာပေမယ့် ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ သူမ ရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။ အကျည်းတန်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဘ၀ထဲကို သူမကို မခေါ်ရက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်းဗျာ... နှစ်ကိုယ်တူ ထားခဲ့တဲ့သစ္စာတွေကို မသိစိတ်က တောင့်တနေမိပေါ။ နေ့လေးတစ်နေ့မှာတော့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာ ဖြစ်လာပါတယ်။ သူမရောက်လာပါပြီ..
ကျွန်တော့်ကိုပြုံးပြနေတဲ့ အပြူံးလေးက အေးစက်စက်လေး... သူမပြောလိုက်တာကတော့
"ကိုလေး ကို ကန်တော့ပါရစေ"
ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိအောင်ကို ကျွန်တော့်ချစ်သူလေးက ထူးဆန်းတာတွေကို လုပ်နေပြီ။ ကြမ်းပြင်မှာ ပုံ့ပုံ့လေးထိုင်ချကာ ကျွန်တော်ကို ကန်တော့နေတော့သည်။ ကန်တော့ခြင်း အဆုံးမှာ သူမပြောလိုက်တာလေးက "ပြစ်မှားမိတာများရှိခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ ကိုလေး.. ငယ့် ကို မေ့လိုက်ပါတော့" တဲ့။
သြကာသလောကသား အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်ဘာဆုပေးရမတုံး ???? "လိုအင်တောင့်တမှုတွေပြည့်ပါစေ" လို့ပြောရမှာလား။
ကျွန်တော်ချစ်သူကောင်မလေးကတော့ အဆန်းထဲကမှ အဆန်းဆုံးကို လုပ်ပြသွားပါပြီ။
သူကျောခိုင်းသွားပြီ.. နေမင်းကြီးကလည်း ၀င်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော်ချစ်သောမြေအတွက် ကာကွယ်ပေးရင်း ကျွန်တော်ခန္ဓာတင်မက၊ ကျွန်တော်ချစ်သောကောင်မလေးပါ စွန့်လွှတ်လိုက်ရပြီ။ ကျွန်တော်လို "တောင်းတဲ့ဆုတွေပြည့်ပါစေ" အဖြစ်မျိုးနဲ့ မကြုံကြပါစေနဲ့.... ညီတို့၊ အစ်ကိုတို့
[ခံစားချက်ကို ရေးသားခွင့်ပြုသော စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ်(၄၆)မှ အစ်ကို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။]
Posted by Army Soul at 3:36 AM0comments
Posted by Army Soul at 3:14 AM0comments
နေရောင်ခြည်ပူပြင်းမှုသည် ဆောင်းတွင်းဟု ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိအောင်ကို ပူပြင်းနေသည်။ လူကုံထန်တွေသာ နေထိုင်သော တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းတစ်လျှောက်တွင် ကားများကတော့ ဥဒဟိုသွားလာနေကြသော်လည်း အရိပ်ကင်းမဲ့သော ထိုလမ်းမပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်သွားလာနေသူ မရှိသလောက်ကို ရှားပါးသည်။ သူမတို့ သူငယ်ချင်းတစ်စုသည်လည်း ထိုဥဒဟိုသွားလာနေကြသော ကားများထဲမှ တစ်စီးအပါအ၀င်တွင် လိုက်ပါလာကြသည်။ သူမ ကားမောင်းနေရင်းမှ လူတစ်စုသည် ပူပြင်းသော နေရောင်ခြည်အောက်တွင် အရိပ်ကင်းမဲ့သော ထိုလမ်းတစ်လျှောက် သွားနေကြသည့် မြင်ကွင်းလေးဝင်လာသည်။ လူတွေလမ်းလျှောက်တာ မဆန်းသော်လည်း ဆန်းနေသည်မှာ ထိုလူစုထဲမှ တစ်ယောက်သောသူတွင် သစ်သားချိုင်းထောက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်......
ထိုလူစုသည် သံလွင်ရောင်ဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားကြသော်လည်း ထိုချိုင်းထောက်နှင့်သူကတော့ သံလွင်ရောင်အင်္ကျီလက်ရှည်လေးနှင့် ပုဆိုးကိုသာ ၀တ်ဆင်ထားသည်။ သူမ ကားကို ထိုလူစုအကျော်တွင် ထိုးရပ်လိုက်သည်။ သူမသူငယ်ချင်းသည် ကားကိုထိုးရပ်သော် သူမကို "ဟာ..နင်ကတော့ စစ်ဝတ်စုံမြင်တာနဲ့ကို ဘာထဖြစ်ရတာတုံး"
သူမသူငယ်ချင်း ပြောလိုက်သောစကားကို စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိသည်.. သူမတစ်ခွန်းထဲသာ ပြန်ပြောနိုင်ခဲ့သည်..
ထိုလူတစ်စု သူမကားနားမှ ဖြတ်သောအခါ သူတို့လက်ထဲတွင် စာအုပ်လေးများကို ကိုင်ဆောင်ထားကြသည်။
"ဟုတ်ကဲ့ သမီး ၀ယ်ချင်လို့ပါ။" သူမ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ယူ၍ ငွေချေသောအခါ သူမပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှ စစ်ဝတ်စုံဖြင့် လူတစ်ယောက်ပုံကို ထိုလူတစ်စုထဲမှ တစ်ယောက်က မြင်သွားပုံရသည်။
"သြ..ညီမရဲ့ အစ်ကိုကလည်း အရာရှိတစ်ယောက်ပဲလား"
"မဟုတ်ပါဘူး..အစ်ကို။ ညီမအဖေကလည်း မိုင်းနင်းမိထားတဲ့ စစ်သည်တစ်ယောက်ပါ"
သူမလည်း ၀ယ်ခြမ်းပြီးသည်နှင့် ကားလေးကို တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအတိုင်း ဆက်မောင်းခဲ့သည်။ သူမ သူငယ်ချင်းဆီက ပြောလိုက်သံ စကားလေးကတော့
"နင့်ကို တောင်းပန်ပါတယ်... ဦးလေးကြီးတွေက ဘ၀ကို ဒီလိုဖြစ်သွားတာတောင် သူတပါးတွေလို တောင်းစားနေတာ မဟုတ်ပဲ မသန်ပေမယ့် ကိုယ်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အားလေးဖြင့် သမာအာဇီဝနဲ့ မိသားစုကို လုပ်ကျွေးနေတာ ငါတို့တွေ...ကိုယ်ချင်းစာပြီး အားပေးသင့်တယ်.."
[အဖြစ်အပျက်လေးက ရိုးစင်းသော်လည်း စစ်သားတွေရဲ့ ပြင်းထန်ခိုင်မာသော စိတ်ဓါတ်ကို သူငယ်ချင်းမလေး..သိသွားတာကို ၀မ်းသာမိပါသည်။]
Posted by Army Soul at 3:07 AM0comments
Posted by Army Soul at 2:24 AM0comments